Cabirka qalabka wax lagu wareejiyo waxaa laga sameyn karaa -168 ilaa 323, shahaadada u janjeera iyo dhererka waa la habeyn karaa. Tacliiq: 1, 1000/5 / 5.5, "1000 ″ nooca sanduuqa marshada," 5 "saamiga dhimista," 5.5 ″ ee. Awoodda mootada (380V / 50Hz / 3P, 1450rpm); 2. Qaabdhismeedka heerka gawaarida: 380V, 50Hz, 1450rpm, saddex waji, macaamiisha waxay leeyihiin shuruudo gaar ah waa la habeyn karaa; 3. Haddii ay jiraan duruufo gaar ah, waxay u dooran karaan hadba xaaladda ual ee mootada ...
Caadi ahaan qalabka wax lagu xiro ee ka laalaada waa Aluminium, laakiin haddii aad doorato inaad gudbiso ciidda, fadlan dooro taageerada birta. Dhammaan isku-xidhka dhammaadku caadi ahaan waa hal cabbir haddii dhexroorka isku-xireyaasha wareejinta sibidhka la xaqiijiyo. Waalka balanbaalis waxaa loo isticmaalaa isku xirka iyo xakameeyo qulqulka alaabta. Caadi ahaan waxaan doorannaa aluminium disk, iftiin iyo adag. Waxay noqon kartaa mid gacanta ama pneumatic ku shaqeeya. 220v ama 24 solenoid waalka ayaa labadaba loo heli karaa hawlgalka pneumatic. Model Miisaanka Miisaanka (k ...
1. Vibratory Xulashada xulashada maaddada heer caalami ah, Kala-saarida heerka F, xiritaanka waara, oo leh qiimo sare, qaab dhismeed adag. Waxaan badiyaa doorannaa OLI-WOLONG ama DKTEC gariir si aan u dhalino gariir kuhabeegga cowska bin Model No Speed ​​Force Output Power Net Miisaanka Cabbirka MVE100 / 3 3000rpm 99kg / 1kN 0.04kw 4.9kg 10A0 MVE200 / 3 3000rpm 198kg / 2kN 0.09kw 6.6kg 20A0 2. Nidaamka Pneumatic Waxaan inta badan doorannaa AIRTAC dhululubo sambabeed iyo sidoo kale kelida ...
Faa'iidooyinka Badeecada Nala Soo Xiriir Is-dhexgal isku-dhafan oo isku-dhafan iyo wareegyo isku-dhafan oo gaaban increase Korodhka degdegga ah ee isku-dhafka isku-dhafka iyada oo loo marayo is-weydaarsiga maaddada culus consist Isku-dheelitirnaan isku mid ah iyo isku-mid-ahaansho wareeg kasta oo isku-dhaf ah Fududeynta wax-ku-oolka tamarta ellent Waxqabadka wanaagsan ee isku-darka heer sare inkastoo ilaalinta mashiinka hooseeya individual Isticmaal tamar gaar ah oo hooseeya waqtiyada isku darka gaagaaban, isku-darka la filaayo ...
SICOMA CONCRETE MIXER SICOMA waxay soo saartaa taxane isku dhaf ah oo moodooyin badan. Marka loo eego baahida macaamiisha, shirkadeena waxay doorataa inta badan heerarka caadiga ah ee MAO / MSO / MEO / MPC / AMP. Mashiinka inta badan wuxuu ka kooban yahay toddobo qaybood oo nidaam ah: Isku qasida taangiga / Nidaamka isku qasida / sanduuqa isku xidhka / Nidaamka la socodka iyo qalabka digniinta / Nidaaminta Sifeynta (ma ahan taxanaha MPC / AMP) / Nidaamka Bixinta / Nidaamka Gudbinta MAO3000 / 2000 MAO4500 / 3000 Shatt wuxuu ku egyahay ilaalinta sool badan iyo hawada nadiifinta sool protectio ...
Sibidhka sibidhka, oo sidoo kale loo yaqaan taangiyada sibidhka, ayaa sidoo kale loo qaybin karaa silo sibidh kala jaban iyo silo sibidh ah oo isku xidhan Kala-goynta silo guud ahaan waxay ku habboon tahay gaadiidka weelka si loo badbaadiyo kharashka iyo wareegga wareegga. Sibidh ayaa si wada jir ah loogu isticmaalaa warshadda isku-darka la taaban karo ee taageerta, isticmaaluhuna wuxuu ku beddelayaa miisaska sibidhka awoodo iyo caddadyo kala duwan iyadoo loo eegayo soosaarka warshadda isku-dhafka ah. Waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee warshadda isku qasan. Marka lagu daro keydinta sibidhka, waxaa ...
Suumanka qaada Suunka Nala Soo Xariir Waxaa jira noocyo fara badan oo xambaarsan suunka qaaska ah ee nidaamka quudinta ee keydka, sida wareejinta sharadka jiifka ah, gudbiyaha suunka u janjeera, socodka suunka gudbiyaha sub-feed, S-qaabeeya gudbiyaha suunka sub-feed, Rotary sub-feed conveyor conveyor iyo isku-xambaariyaha xambaarsan suunka sub-feed, oo lagu muujiyey quudin iyo soo saaris dhibco badan iyo shaqo yar. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa birta, macdanta, saldhigga elektarooniga ah, warshadaha qalabka dhismaha, ...
Suunka Flat Nala Soo Xiriir Suumanka gudbinta dharka badan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa in la gaarsiiyo waxyaabaha ku jira miinada, dekedaha, metallurgy. Waxaa jira noocyo fara badan oo nooca fiber ah sida polyester, suuf, terylene, polyamide, monofilament, waxaana inta badan isticmaalnaa naylon （polyamide）, polyester EP nooca suunka. Fadlan lasocda faahfaahinta Qaab dhismeedka sheyga Qaab dhismeedka sheyga dhumucdiisuna Xoog Xoog Fudud (N / M) dhumucda caag daboolida (mm) Range Wide (mm) Weft Weft ...
Uruuriyaha Boorka Nala Soo Xariir aruuriyaha siigada ee gariirka ah waxaa loogu talagalay in lagu rakibo dusha silaasyada, haamaha iyo buuqa. Waxay la yimaadaan shaashadda birta ah ee birta ah iyo giraanta hoose, oo ay ku jiraan walxaha shaashadda kartoonka si toos ah loogu rakibay, oo lagu nadiifiyo gariiriye mashiinka korontada ku shaqeeya. Caadi ahaan uruuraha boodhka leh marawaxadda ayaa loo isticmaalaa dusha sare ee qasanka shubka. Aagga Soodheynta Model (volume volume Mugga wasakhda (m³ / h) Qty ee bacaha boodhka (kumbiyuutarada) ...
Nidaamka Mashiinka Dufcadda Nala Soo Xiriir Mashiinka qaniinyadu waa qaybta ugu weyn ee saldhigga isku dhafka, oo guud ahaan loo qaybin karo laba hab: cabbiraad isugeynaya iyo cabbiraad shaqsiyeed. Qiyaasta isugeynta guud ahaan waxay koontarooshaa xakamaynta dhululubada si ay usoo saarto qalabka. Qiyaasta isu geynta ee walxaha kasta ayaa ka saxsan metering hore dheecaanka dheecaanka. Qalabka loo baahan yahay ayaa lagu qasan yahay qalabka wax lagu raaco ee sagxadda hoose ka dib qiyaas ahaan, iyo t ...
Nidaamka Qiyaasta Wadarta Wadarta, Isugeynta Nidaamka Dufcadda, Mashiinka Dufcaanta Isugeynta, Nidaamka isugeynta wadarta otomaatiga ah, Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni, Qaybo ka Mashiinka Mashiinka la taaban karo,